मेरो Fitbit ट्र्याक साइकल चलाउनेछ - BikeHike
के Fitbit साइकल चलाउनको लागि राम्रो छ?
म कसरी मेरो Fitbit मा साइकल जोड्न सक्छु?
कुन साइकल चलाउने एपहरू Fitbit सँग काम गर्छन्?
Fitbit कसरी आउटडोर बाइक ट्र्याक गर्छ?
के Fitbit चार्ज4स्वचालित रूपमा साइकल चलाउने ट्र्याक गर्दछ?
म कसरी मेरो Fitbit चार्ज3मा बाइकिङ ट्र्याक गर्छु?
म कसरी मेरो बाइक ट्र्याक गर्न सक्छु?
किन Fitbit ले बाइकिङलाई चरणहरूको रूपमा गणना गर्दैन?
स्पिन बाइकमा माइलेज कसरी ट्र्याक गर्नुहुन्छ?
के फिटबिट पेलोटनसँग सिंक हुन्छ?
Fitbit ले कसरी थाहा पाउँछ कि तपाईं बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ?
के Fitbit4साइकल चलाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ?
म कसरी मेरो Fitbit चार्ज4मा साइकल थप्न सक्छु?
मैले मेरो Fitbit चार्ज4मा मेरो स्थिर बाइक कसरी ट्र्याक गर्ने?
के Fitbit चार्ज3ले बाइकिङलाई चिन्नुहुन्छ?
म कसरी मेरो Fitbit चार्ज3मा साइकल चलाउने सेटअप गर्छु?
के साइकल हिड्नु जत्तिकै राम्रो हो?
म कसरी मेरो फोनमा मेरो बाइक ट्र्याक गर्न सक्छु?
बाइकको लागि उत्तम जीपीएस ट्रयाकर के हो?
के बाइकहरूमा ट्र्याकरहरू छन्?
हो, Fitbits ले SmartTrack भनिने टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर तपाईंको बाइक सवारी ट्र्याक गर्न सक्छ र तिनीहरू धेरै तरिकामा साइकल चालकहरूको लागि धेरै उपयोगी छन्। धेरै Fitbit उत्पादनहरूको एउटा विशिष्ट विशेषता, जुन साइकल चलाउनको लागि आवश्यक साबित भएको छ, GPS एकीकरण र कार्यक्षमता हो।
Fitbit Charge 4: साइकल चलाउनको लागि उत्तम फिटनेस ट्रयाकर यसको मतलब तपाईले आफ्नो फोन घरमै छोड्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई बाइक सवारीको लागि चार्ज लिन चाहनुहुन्छ भने। सामान्य हृदय गति डेटाको साथसाथै, चार्ज4Fitbit - Active Zone मिनेटको लागि नयाँ फिटनेस मेट्रिकको पहिलो प्रदर्शन पनि हो।
Fitbit एप ड्यासबोर्डमा तपाइँको व्यायाम इतिहास खोल्न व्यायाम टाइल ट्याप गर्नुहोस्। यो टाइल हो जसले "ट्र्याक व्यायाम" भन्छ यदि तपाईंले आज काम गर्नुभएको छैन भने। शीर्ष दायाँ कुनामा स्टपवाच प्रतिमा ट्याप गर्नुहोस्। लग ट्याप गर्नुहोस्। हालको गतिविधि ट्याप गर्नुहोस् वा व्यायाम प्रकार खोज्नुहोस्। गतिविधि विवरणहरू समायोजन गर्नुहोस् र थप्नुहोस् ट्याप गर्नुहोस्।
तपाइँको Fitbit Strava बाट धेरै भन्दा धेरै प्राप्त गर्नका लागि शीर्ष 10 एपहरू। Strava धेरै GPS आधारित यन्त्रहरूसँग राम्रोसँग जोडीन्छ, तर यो फिटनेस ट्र्याकरहरूको लागि पनि एक ठोस एप हो। नक्सा मेरो रन। मेरो फिटनेस पल। Fitstar व्यक्तिगत प्रशिक्षक। थर्मोको हाइड्रेशन एप। हरायो! मेरो Fitbit खोज्नुहोस्। फिटबेस।
फिटबिट सर्जको लागि सही, बाइक ट्र्याकिङले सवारहरूलाई दूरी, अवधि, औसत गति, मुटुको दर, क्यालोरीहरू जलेको र समय हेर्न अनुमति दिन उपकरणमा GPS र अन्य उन्नत सेन्सरहरू प्रयोग गर्छ; थप विवरणमा मार्गहरू, गति र उचाइको समीक्षा गर्न तथ्याङ्कहरू स्वचालित रूपमा Fitbit एप ड्यासबोर्डमा ताररहित रूपमा सिङ्क हुन्छन्।
पूर्वनिर्धारित रूपमा चार्ज4द्वारा ट्र्याक गरिएका खेलहरूमा दौड (GPS), बाइकिङ (GPS), पौडी खेल्ने, ट्रेडमिल, बाहिरी कसरत (GPS) र हिड्ने (GPS) समावेश छन्। त्यो किनभने चार्ज4ले उपकरणमा कसरत मोडहरूमा छवटा सर्टकटहरू मात्र समात्न सक्छ।
मसँग चार्ज3छ, र तपाईंले बाइक पहुँच गर्ने तरिका यो हो: एप खोल्नुहोस् र आफ्नो अवतार ट्याप गर्नुहोस् (माथि बायाँ; तपाईंको अनुहार हुन सक्छ) यसले तपाईंलाई तपाईंको खाता पृष्ठमा लैजान्छ; तल आफ्नो यन्त्र फेला पार्नुहोस् (चार्ज ३) र यसमा ट्याप गर्नुहोस्। यो जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, घडी अनुहारहरू छान्नुहोस्; व्यायाम सर्टकटहरूमा तल स्क्रोल गर्नुहोस्; यसमा ट्याप गर्नुहोस्।
बाइक जीपीएस ट्रयाकर स्कूटी/स्कुटर आदि जस्ता कुनै पनि २ पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। लेटस्ट्र्याक सवारी साधन ट्र्याकिङ प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विचार आफ्ना सबै ग्राहकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। मोटरसाइकलको लागि जीपीएस ट्र्याकिङ एप व्यक्तिले स्थापना गरेको हुनुपर्छ जसले सम्बन्धित व्यक्तिको स्थान ट्र्याक र निगरानी गर्नेछ।
दुर्भाग्यवश, Apple Watch, Fitbit, र अन्य गतिविधि मनिटरहरूले बाइकिङका लागि समान चरणहरू क्याप्चर गर्दैनन्। यो किनभने Apple Watch, Fitbit, Garmin, र Xiaomi Mi Band जस्ता गतिविधि मोनिटरहरूले हात चालमा आधारित चरणहरू गणना गर्छन्। बाइक चलाउँदा तपाईको हात प्रायः स्थिर हुन्छ।
आफ्नो यन्त्रमा इनडोर साइकल चलाउन ट्र्याक गर्न, "व्यायाम" मा जानुहोस् र त्यसपछि "स्पिनिङ" चयन गर्नुहोस्। त्यसोभए, सुरु गर्न छोटो कट लामो-थिच्नुहोस् र एकचोटि तपाईंले सकिसकेपछि यसमा ट्याप गर्नुहोस्। FitBit ले तपाइँको मुटुको दर, गति, क्यालोरी जलेको, र अवधिसँग सम्बन्धित सबै डाटा रेकर्ड गर्नेछ।
अब तपाईंले प्रत्येक पटक सवारी पूरा गर्दा Peloton सवारीहरूबाट स्वचालित रूपमा आफ्नो Fitbit खातामा मेट्रिकहरू साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ। कसरतको लम्बाइ, यात्रा गरिएको दूरी र तपाईंको Fitbit ड्यासबोर्डमा जलेको क्यालोरीहरू जस्ता Peloton मेट्रिकहरू हेर्नको लागि आफ्नो Peloton र Fitbit खाताहरू जडान गर्नुहोस्।
Fitbit ले तपाइँको गतिविधि डेटा र बेसल मेटाबोलिक दर (BMR) को संयोजन मा तपाइँको एक सत्र को समयमा जलेको क्यालोरी अनुमान गर्न को लागी प्रयोग गर्दछ। धेरै साइकल चालकहरूको लागि तपाईंको मुटुको दर अनुगमन गरेर तपाईंको कसरत र दिनचर्याहरूको तीव्रता मापन गर्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण छ।
Fitbit Charge4साइकल चालक मात्र होइन, आफूलाई 'सक्रिय' ठान्ने जो कोहीको लागि व्यायाम घडी हो।
तपाईंको फोन एपमा: तपाईंको प्रोफाइल तस्वीरमा ट्याप गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंको चार्ज 4। व्यायाम सर्टकटहरूमा तल स्क्रोल गर्नुहोस्। माथिल्लो दायाँमा सम्पादनमा ट्याप गर्नुहोस् र तपाईंलाई आवश्यक नभएको सर्टकट हटाउनुहोस्। अब + व्यायाम सर्टकट निलो हुनेछ। + व्यायाम सर्टकटमा ट्याप गर्नुहोस् र अण्डाकार थप्नुहोस्।
तपाइँको Fitbit मा तपाइँको इनडोर साइकल चलाउने सत्रहरू ट्र्याक गर्न, केवल व्यायाममा जानुहोस् र त्यसपछि तपाइँ स्पिनिङमा नपुग्दासम्म गतिविधिहरूसँग स्वाइप गर्नुहोस्। तपाईंले त्यसो गर्नु पर्छ रेकर्डिङ सुरु गर्नको लागि यसमा थिच्नुहोस् र तपाईंले सकिसकेपछि यसलाई रोक्न फेरि ट्याप गर्नुहोस्। सरल!जुलाई ४, २०२१।
Fitbit चार्ज3साइकल चलाउनको लागि उत्कृष्ट छ र अन्य धेरै। यसको अन्तर्निहित व्यायाम मोडहरू, SmartTrack व्यायाम पत्ता लगाउने, र हृदय मनिटरको साथ, Fitbit Charge3साइकल चलाउनको लागि उत्तम फिटनेस ट्रयाकर साथी हो, चाहे त्यो ट्रेलमा होस् वा स्पिन क्लासमा।
यसरी: Fitbit एप खोल्नुहोस्। आफ्नो खाता सेटिङहरू पहुँच गर्न माथिल्लो दायाँ कुनामा आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्। यन्त्रहरूको सूचीमा चार्ज3मा ट्याप गर्नुहोस्। "व्यायाम सर्टकटहरू" मा तल स्क्रोल गर्नुहोस् र यसलाई ट्याप गर्नुहोस्।
साइकल चलाउनु हिड्नु भन्दा बढी प्रभावकारी छ, त्यसैले तपाईले छिटो हिँडेर कडा परिश्रम गर्नुहुनेछ र सायद तपाईको मुटु, फोक्सो र प्रमुख मांसपेशीहरू बढी व्यायाम गर्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ, साइकल चलाउँदा हिड्नु भन्दा कम्मर, घुँडा र खुट्टामा कम गाह्रो हुन्छ।
वास्तविक-समय तथ्याङ्कहरू प्राप्त गर्नुहोस् आफ्नो फोनमा, Google Fit एप खोल्नुहोस्। ट्र्याक कसरत थप्नुहोस् ट्याप गर्नुहोस्। तपाइँ सुरु गर्न लाग्नु भएको गतिविधि चयन गर्न, तल तीर ट्याप गर्नुहोस्। कसरत सुरु गर्नुहोस् ट्याप गर्नुहोस्। यदि तपाईं बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने, आफ्नो फोन आफ्नो खल्तीमा राख्नुहोस्। ट्र्याकिङ तपाईको फोन माउन्ट वा ब्याकप्याकमा छ भने भन्दा बढी सटीक हुनेछ।
भारतमा कार र बाइकहरूको लागि उत्तम जीपीएस ट्र्याकर वनल्याप माइक्रो - हिडन वाटरप्रूफ जीपीएस ट्रयाकर। Autowiz Obd Gps कार ट्रयाकर। USGlobalSat USB GPS रिसीभर। Acumen Tracker UC 900 GPS ट्रयाकर। Lamrod सर्वोच्च गुगल लिंक GT02A GPS ट्रयाकर। Akari Gt02A GPS ट्रयाकर उपकरण। Zaicus ST-901 वाटरप्रूफ बिल्ट-इन ब्याट्री GSM GPS ट्रयाकर।
बजारमा विभिन्न प्रकारका जीपीएस ट्र्याकरहरू उपलब्ध छन् जसले तपाईंलाई आफ्नो बाइकको स्थान ट्र्याक राख्न मद्दत गर्दछ। केही GPS सेवा प्रदायकहरूले गति सक्रियता र वास्तविक-समय स्थानको द्रुत ट्र्याकिङको थप उन्नत विकल्पहरू पनि प्रस्ताव गर्छन् जसले तपाईंको बाइक चोरी वा हराएको अवस्थामा धेरै मद्दत गर्दछ।
Fitbit चार्ज ट्र्याक साइकल चलाउँछ
प्रश्न: Fitbit चार्ज3ट्र्याक साइकल चलाउन सक्छ
Fitbit चार्ज3ट्र्याक साइकल चलाउँछ
प्रश्न: मेरो Fitbit चार्ज2ट्र्याक साइकल चलाउन सक्छ
के मेरो Fitbit चार्ज Hr ट्र्याक साइकल चलाउँछ
Fitbit चार्ज2ट्र्याक साइकल चलाउन सक्छ
Fitbit ट्र्याक साइकल चलाउँछ
के तपाइँ Fitbit चार्ज2मा साइकल चलाउन ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ
Fitbit चार्ज2मा साइकल चलाउने कसरी ट्र्याक गर्ने
द्रुत उत्तर: के Fitbit चार्ज ट्र्याक साइकल सवारी
Fitbit चार्ज ट्र्याक बाइक सवारी गर्न सक्नुहुन्छ
द्रुत उत्तर: के Fitbit चार्ज ट्र्याक स्टेशनरी बाइक
द्रुत उत्तर: के Fitbit ले ट्र्याक साइकल चलाउँछ